जडीबुटीको राजा शिलाजीतको अनेकौं फाइदा
साउन १८, २०७७
नेपालका पहाडमा पाइने जडिबुटीमा सिलाजितको विशिष्ट स्थान छ।
आयुर्वेदमा सिलाजितको खुब प्रशंसा गरिएको छ र यसलाई जडिबुटीहरूको राजा मानिएको छ । बलपुष्टिकारक, ओजवर्धक, दौर्बल्यनाशक र पौष्टिक गुण शिलाजीतमा पाइन्छ ।
रोगीको रोग हटाउनका लागि मात्र नभई स्वस्थ व्यक्तिका लागि पनि सिलाजितको बडो महत्व छ । यौन दुर्बल अर्थात् नपुंसकताबाट पीडित विवाहित व्यक्तिले मात्र नभई अविवाहित युवकले पनि यसको सेवन गर्दा लाभ पाउँछ ।
विशेषगरी मधुमेह, धातुक्षीणता, बहुमूत्र, स्वप्नदोष, शारीरक दुर्बलता लगायतका रोगहरू यसले निर्मूल बनाइदिन्छ ।
उचित समयमा उचित योगका साथ विधिपूर्वक शिलाजीतको प्रयोग गर्दा असाध्य मानिएका रोग पनि नष्ट हुन्छन् ।
शुद्ध शिलाजीत १० ग्राम, केशर दुई ग्राम, अम्बर दुई ग्राम मिसाएर मजाले घोटेर दुई दुई रत्तीको गोली बनाउनुस् । यसलाई बिहान बेलुका दूधसँग खानुस् । स्वप्न दोष आउन बन्द हुन्छ अनि शरीरमा बल र पुष्टि आउँछ ।
शीघ्र स्खलनका रोगी विवाहित पुरुषले यसको सेवन गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । अमिलो कुरा नखाइकन कम्तीमा पनि ६० दिन यसरी शिलाजित खानुपर्छ ।
आयुर्वेदका अनुसार सिलाजितको उत्पत्ति पत्थरबाट भएको हो । संस्कृतमा पत्थरलाई शिला भनिन्छ । गर्मीको मौसममा पर्वतका चट्टानहरूबाट धातुको अंश पग्लेर चुहिन थाल्छ । यही चुहिएको पदार्थ शिलाजित हो । हेर्दा खेरी यो अलकत्रा जस्तो कालो र गाढा देखिन्छ । सुकेपछि यो एकदम चमकिलो हुन्छ ।
यो तीतो, कसिएको र तातो हुन्छ । सिलाजितको मुख्य उद्देश्य शरीरलाई बल दिएर स्वस्थ, शक्तिशाली र पुष्ट बनाउनु हो । शिलाजीत सुक्दाखेरी गोमूत्रजस्तो गन्ध आउँछ ।
यसको सेवनले सेक्स पावर मात्र बढ्ने नभई बुढ्यौलीका समस्या पनि समाधान हुन्छन् ।
शिलाजित चार प्रकारका हुन्छन् : रजत, स्वर्ण, लौह र ताम्र । प्रत्येक प्रकारको शिलाजित गुण तथा लाभ पनि प्रकृति अनुसार नै हुन्छ ।
पित्त प्रकोप (एसिडिटी) वा अम्लपित्त (हाइपर एसिडटी)बाट पीडित रोगी, आँखा रातो हुने समस्या, पेटको अल्सर, शरीरको ताप, अंगमा जलन जस्ता समस्या भएका व्यक्तिले शिलाजीत सेवन गर्नु हुँदैन ।
शिलाजीतको सेवन गर्दा रातो खुर्सानी, तातो खाना र पेयपदार्थ, मसालेदार भोजन, मासु, अण्डा, रक्सी, माछा, मकै, सक्खर जस्ता खानेकुरा खानु हुँदैन ।
त्यस्तै राति जागा बस्ने, बिहान ढिलोसम्म सुत्ने, मलमूत्रको वेग रोक्ने अनि असाध्यै श्रम वा व्यायाम गने पनि गर्नु हुँदैन ।
बजारमा शिलाजितका नाममा जे पायो त्यही वस्तु पनि पाइन्छन् । आधिकारिक ठाउँबाट मात्र शिलाजीत किन्नु उपयुक्त हुन्छ । सिंहदरबार वैद्यखानामा पाइने शिलाजीत शुद्धताको कसीमा खरो उत्रिएकाले त्यहाँबाट किन्ने सल्लाह दिइन्छ ।
इम्युनिटी पावर बढाउन खानुस् सजिउन
आँखामा आनो आउने समस्या छ ?
खाली पेटमा यी कुरा खाँदा ध्यान दिन जरुरी
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमले के-के भने ? (पूर्णपाठसहित)
सुदूरपश्चिममा कैलालीमा ७ हालसम्म १५ को ज्यान गयो
प्रदेश १ मा कोरोनाबाट थप ३ को मृत्यु
दलित युवाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न संसदीय टोली धनुषामा
सस्तोमा डलर साटिदिने भन्दै ५ लाख लुटपाट, २ जना प्रहरीको फन्दामा
जब बालकलाई भालुले पछ्याइरह्यो
कालो दाग भएको केरा खानुका फाइदा
दुईपटक भयो अर्जुनको मृत्यु, पहिलोपटक बाँचे कसरी ?